Yile nto siyilindeleyo kwiWWDC 2017 | Ndisuka mac
Kushiyeke iveki nje enye yeziganeko ezilindelekileyo zonyaka kulo lonke uluntu lwaseApple. Njengoko sisazi, iWWDC elandelayo (INgqungquthela yabaHlabathi beHlabathi) Iya kuqhubeka ukusuka nge-5 ukuya kwi-9 kaJuni. Njengoko inkampani yaseNyakatho Melika sele iqhelile kuthi, umsitho uza kuqala nge-10.00: 7 am ixesha lendawo (malunga ne-XNUMX: XNUMXpm eSpain; ungabona elona xesha kwindawo yakho apha) kunye izakubanjelwa eMcEnery Convention Centre, eSan José, eKhalifoniya.
Ngokwesiqhelo, le nkomfa izisa uhlaziyo ekudala lulindelwe kwiinkqubo zokusebenza zenkampani. Kukujika kwe iOS 11 yezixhobo eziphathwayo, iiMacOS 10.13 zazo zonke iiMacs, kunye neWOSOS 4 yeewotshi zenkampani kunye neTVV 10 yeApple TV. Nangona kunjalo, inqaku eliphambili elilandelayo lithembisa okungaphezulu kokuhlaziya nje "kwesiqhelo". Kuyabonakala ukuba, sinokubona ishishini elitsha apho iApple ngokuqinisekileyo iza kungena khona kweli hlobo.
1 Yintoni esinokuyilindela?
2 Ukuhlaziywa kwenkqubo yokusebenza
3 Eyona nyani iza kwiApple
4 IPad entsha?
5 Ukuhlaziywa kwe-12-MacBook Pro
6 IAmazon Prime iya kufumaneka kwiApple TV
Nangona iinzame zika-Apple zokufika ngexesha lokunikezelwa kwazo zonke izinto ezintsha ezinqabileyo kwaye ziyimfihlo ziyinyani, kuyinyani ukuba kubonakala ngathi kuya kusiba nzima ukuba uphawu lube nokulawula amarhe kunye nokuvuza okuvela kumaphepha-ndaba mihla le. Nangona kunjalo, Asinakuze sikhuphe isimangaliso esingaqhelekanga sokuba abafana baseCupertino bakwazile ukufihla.
Emva koko, siza kunika iinkcukacha malunga noko kucwangciselwe usuku olukhulu. Ukuba yinkomfa eyenzelwe ngokukodwa abaphuhlisi kwi-ecosystem yeApple, ayitsho ngaphandle koko Uhlaziyo kwiinkqubo zabo zokusebenza, ngokusebenza okutsha kunye nokhuseleko olukhulu, luya kugubungela uninzi lomsitho. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba iApple ikwabonisa into enxulumene neNyani eyiyo. Ngokubhekisele kwizixhobo zekhompyutha, amanye amarhe abonisa ukuba kunokwenzeka ukuba iApple isebenzise umsitho ukubonisa iPad Pro entsha, kunye neendaba kwi-12 ″ MacBook Pro. Kusenokwenzeka ukuba ixesha elithile lichithwe kudityaniswa iAmazon Prime neApple TV. Okokugqibela, sinokubona uhlaziyo lokuqala lwee-AirPods, ii-headphone eziza kubakho kwintengiso yonyaka omnye.
Ukuhlaziywa kwenkqubo yokusebenza
NjengakwiWWDC nganye, unyaka nonyaka iApple iveza ezona ndaba zibalulekileyo kwisoftware yazo zonke izixhobo zayo. Ke, silindele ukulungiswa kunye nokhuseleko kunye nokuphuculwa koyilo kwi:
IOS 11: Kukho intetho yemowudi yobusuku entsha kunye eyilahlekileyo, ukusebenza ngamandla okukhulu kwesixhobo kunye newijethi kwiziko lolawulo.
IMacOS 10.13: imiyalelo emitsha yeSiri, ujongano olungcono, kunye nokusebenza okungcono kunye nokusebenza kwamandla kuzo zonke iimodeli zeMac.
umlindi 4: Iindawo ezintsha kunye nokuphuculwa kolawulo lweenkumbulo zeWatch.
TVOS 4 yeApple TV.
Eyona nyani iza kwiApple
Kukho intetho yokuba inokuba sisiciko esikhulu kulo nyaka. Inyaniso yokwenyani ibonakalisile ukuba ilapha ukuhlala. I-Apple kufuneka ingene kwintengiso ekhulayo kwaye ithembisa ukuba iya kuba sisitshixo seminyaka ezayo. Kuyabonakala ukuba, i-iPhone kunye ne-iPad yexesha elizayo iya kuba nekhamera engaphambili evumela iVR Oku kungathetha ukuba kunomdla kakhulu kunye neeapps ezintsha kunye nemisebenzi.
Kwimarhe yehardware, inkampani esekwe eCupertino ibonakala ngathi ithathela ingqalelo ukongeza kwimveliso yayo, IPad Pro enobukhulu obahlukileyo kobo sele busaziwa kwiApple. Amarhe akhomba kumlinganiso omtsha we-10.5 ", ngokuchasene ne-12.9 yangoku".
Ukuhlaziywa kwe-12-MacBook Pro
Amanye amarhe akhomba nakwiimodeli ezintsha ze-12-MacBook Pro njenge iqabane lethu uPedro lisixelele phakathi ku-Meyi, isixhobo esingakhange sihlaziywe ixesha elide, ukusukela oko sasungulwa kunyaka ophelileyo.
IAmazon Prime iya kufumaneka kwiApple TV
Kuyimfihlo evulekileyo. Iinkampani zinesivumelwano phakathi kwabo sokubonelela ngeqonga lomxholo elitsha leAmazon kwifayile ye- WWDC, phi enye idemo yoku kunye neApple TV ibonwa kwangaphambili. Olu luhlaziyo oluthathe ixesha elide ukugqiba.
Ziye zayinxalenye yeenkwenkwezi zamaxesha okugqibela. UApple wabetha isitshixo kwakhona. Iifektri ezisebenzela iApple azijongani nazo ibango elikhulu lee-AirPods banazo kwihlabathi liphela. Kuyabonakala ukuba, umbono kukuba ngokudibeneyo ne-iPhone entsha kulo nyaka, ezinye ii-AirPods ezihlaziyiweyo zongezwa kwibhokisi enye emva kokugqiba unyaka wokuqala wentengiso.
Siza kubona, kwiveki nje enye, ukuba amakhwenkwe aseCupertino asothuse ngantoni kwaye yintoni enye abasigcinele yona. Njengesiqhelo, ungawulandela umsitho kwiwebhusayithi esemthethweni yeApple, ngalo naliphi na iqonga okanye isixhobo. Siza kuba lapha bukhoma ukukuxelela zonke iindaba ngomzuzu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Yile nto siyilindeleyo kwiWWDC 2017
I-tvOS 4? I-TV yam sele ine-tvOS 10. Ndinoluvo lokuba baya kuchonga yonke into nge-11.
kwaye mhlawumbi iwotsOS 11 (ukutsiba amanani ambalwa).